Nzira yekuvaka yakaenzana mari yekudyara mari? | Ehupfumi Zvemari
Kana paine chigadzirwa chiri kuunganidza iko kuchengetwa kwevatengesi, hachisi chimwe kunze kwemari yekudyara. Nekuti inokupa iwe nzira dzakawanda dzekushambadzira marongero ekuita kuchengetedza kunobatsira. Ose ari maviri kubva kunzira kubva kune equities uye yakatarwa mari. Asi pasina kukanganwa mamwe mafomati senge emari, imwe nzira kana kutobatanidzwa nezvakagadzirwa kana simbi dzakakosha. Vanenge vese mari yemari iwe unogona kufungidzira. Kunyangwe iyo yepakutanga uye hunyanzvi iyo makambani manejimendi anga achigadzira.
Mari yekudyara inokutendera iwe kuvandudza kudzoka uko kwakasiyana zvigadzirwa zvebhangi zvinokupa iwe panguva ino (nguva inoiswa, zvinyorwa zvevimbiso kana zvikwereti zvehurumende). Izvozvi ivo vanongokupa iwe kutenderedza 1%, chimwe chinhu icho mari inogona kudarika. Kunyangwe ine njodzi dzakakwirira nekuti purofiti haina kuvimbiswa. Asi, muchikamu chikuru chezviitiko zvinoenderana nekushanduka kwemisika yemari. Mukudzoka, iwe unogona kusarudza mhando dzakasiyana dzekudyara zvichienderana neprofile iwe yaunopa se saver.
Asi kuti zvaunofunga zviitike, uchafanirwa kuita sarudzo yemari chaiyo. Kupi kusiyanisa kunotonga pamusoro pemamwe mazano. Mupfungwa iyi, haufanire kutsautsira mari yako yese kune imwe homwe. Nekuti mhedzisiro yacho inogona kukuvadza zvakanyanya zvaunofarira. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuwana zvinopfuura kamwe kushamisika panguva ino yekudyara. Chero zvazvingaitika, unogona kushandisa zvimwe zvirongwa kuitira kuti mari dzako dzisimbe nemazvo. Uye mukati memakore mashoma iwe unenge uchikwanisa kunakidzwa nekudzoka kunogadzirwa pane yako mari yawakaisa mari.
1 Mari yekudyara mune yakatarwa mari
2 Bhegi rinogara riri mumari
3 Sanganisa zvese zviri zviviri mhando dzekudyara
4 Mari, ndiyo yakachengeteka sarudzo
5 Imwe mari mari: nzira yechitatu
6 Deredza kurasikirwa kunogona kuitika
Mari yekudyara mune yakatarwa mari
Kana iwe uchida kugadzira chaiyo yakaenzana uye yakachengeteka portfolio, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekusanganisira yakatarwa mari yemari. Muchikamu icho iwe chaunofunga chakanyanya kukodzera zvichienderana nezvido zvako. Chikumbiro chakakosha ndechekusarudza mabondoni akachengeteka, senge kubva kuGerman neUnited States. Iri zano rinopa chengetedzo kune yako Investment fund portfolio. Uye zvakare, ichave iri imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekuzvidzivirira kubva pazviitiko zvisingafadzi zvemisika yemari. Kunyangwe nekuwana kudzoka pane kuchengetedza, kunyangwe kana izvi zviri zvishoma.
Chero zvazvingaitika, kana zvaunotarisira zviine hukasha, unogara uine mukana wekusarudza iyo peripheral zvisungo. Kubva kunyika dzakaita sePortugal, Italy, Greece kana kunyange Spain pachayo. Nechikonzero chiri nyore kwazvo kuti unzwisise uye icho ndechekuti kugona kwayo kwekudzokorora kwakakura kwazvo kupfuura mune zvimwe zvigadzirwa zvehunhu. Kunyangwe ichokwadi zvakare kuti njodzi yaunofungidzira neyako yekuhaya yakakwira. Nekudaro, iwe unogona kusarudza zano iri pasi pechikamu chidiki chemipiro yako yezvemari.
Bhegi rinogara riri mumari
Chero ripi zano rako rekudyara, zviwanikwa zvemari kubva kumisika yemakambani hazvifanirwe kunge zvichishayikwa. Ndiyo nzira yakajeka yekutora kusvetuka iwe kwaunoda kusimudzira zvido. Kunyangwe, pane zvinopesana, zvinogona kukonzera kuti chiyero gore rega rega chive chakaipa kupfuura zvakajairwa. Asi pamwe nebhenefiti iyo iwe unogona kuzviita nenzira dzakasiyana. Ndokunge, pasina chikonzero chekudira mari yako yese mune imwechete musika kukosha. Iwe une mari yekudyara yehunhu hwese, kubva kune vanozvidzivirira zvakanyanya kana vanochengetedza kune avo vane chimiro chine hukasha. Icho chimwe chezve mabhenefiti anopiwa nekirasi ino yezvigadzirwa zvemari senge mari yekudyara.
Kuburikidza neiyi zano iwe unogona sanganisa masheya, zvikamu uye indices yequities. Zvese mumisika yenyika uye kunze kwemiganhu yedu. Iko hakuna kuganhurirwa pane mamodheru ayo manejimendi makambani anga achigadzira. Kwaunenge uine mukana wakakura wekusarudza kubva ikozvino. Kuti iwe unogona kuzvisanganisa pamwe nezvimwe zvemari zvinhu zveese mafambiro uye zvakasikwa. Zvekuti nenzira iyi, izvo zvinogona kurasikirwa izvo iwe zvaungawana neinonyanya kushomeka kunyoreswa kwemari yekudyara inogadziriswa.
Sanganisa zvese zviri zviviri mhando dzekudyara
Chero nzira, iwe unogona zvakare kusarudza yepakati modhi iyo funga nezvekunzwa kwese. Ndidzo dzinonzi dzakasanganiswa mari uye dzinomiririrwa pasi pezvikamu zvinobvuma zvese zvingabvira. Zvakanaka, uyu modhi unofanirwawo kunge uripo mune yako inotevera yekudyara portfolio. Zvirinani uchafanirwa kupira chikamu chemari yako kune iyi yakavhenganiswa imwe nzira. Icho chigadzirwa kune makambani manejimendi ari kukumikidza zvakawandisa zviwanikwa. Hazvishamise kuti iwe une zvakawanda zvekusarudza kubva uye hauzove nedambudziko kusangana nezvinodiwa zvekudyara.
Iyi kirasi yemari yekudyara inogona zvakare kusanganisira imwe mari yemari yakakosha kukosha. Semuenzaniso, mari sarudzo kana dzimwe nzira dzekudyara. Iri rimwe zano rauinaro panguva ino rekudzivirira mipiro yezveupfumi mumamiriro akashata ezvehupfumi. Iwe unenge uine dziviriro huru mune aya marudzi ezviitiko zvisinganyanyodiwa kune vese saver. Naizvozvo, iri imwe sarudzo iyo isingafanire kunge isipo paunenge uchigadzira portfolio yezvigadzirwa zvemari izvi. Nechinangwa chikuru chekuwedzera chiyero cheako kutarisa kana account yekuchengetedza.
Mari, ndiyo yakachengeteka sarudzo
Uye haifanire kunge isipo mune chero portfolio, kunyanya iya yemaprofile anodzivirira zvakanyanya. Nekuti ivo vakatsiga uye vanoratidza zvisingaite chero mutsauko wekukosha kwakakosha. Ndokunge, zviwanikwa kana zvikapihwa zvishoma. Kunyangwe mukudzoka zvakaoma kwazvo kuti vadzikise, kunyangwe mamiriro akajairika ari akaipisisa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvinoita kuti iwe uve nekupa chikamu chemari yako kune aya mamodheru emaneja. Mhedzisiro yaro yakafanana nekunge yaive nemari isina simba. Ndokunge, iwe haukunde kana kurasikirwa nezvinzvimbo zvavo.
Chero zvazvingaitika, iri sarudzo inokodzera zvakanyanya nguva dzedambudziko rehupfumi. Iko kudonha kwemisika yemari kunoitwa kwese. Nekuti inopa kugadzikana kwakawanda kupfuura mamwe mari ekudyara. Kuve chinzvimbo chinobatsira kwazvo kwenguva dzakati uye kwete kunyanyisa kurema munguva yavo. Chero zvazviri, icho zvakare chakakodzera chigadzirwa kuti uite shanduko kubva kune yakatarwa mari yekudyara mari uye kunyanya akasiyana. Zvese zviri zviviri divi uye mune imwe. Nekuti zvinowirirana kukudziridza rudzi urwu rwezviito zvinotarisira kuchengetedza zvaunofarira sediki uye wepakati investor.
Imwe mari mari: nzira yechitatu
Muzviitiko zvese, iwe unogona kusarudza yemhando yechitatu inoenda kubva kune yechinyakare mari yekudyara. Iine nzira dzakaparadzaniswa sezvazviri sarudza kusagadzikana kana simbi yakakosha zvakanyanya. Asi kuitira zano iri kuti ubudirire zvinobudirira uchafanirwa kuzviita pasi pemitambo yepamusoro. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune iri nani mukana wekutora mukana weichi chiitiko chazvose. Inogona kuve nemhedzisiro inobatsira kwenguva dzakaomesesa dzehupfumi. Kunyangwe iri kirasi yezvigadzirwa risingafanire kunyoreswa pasi pemari isina kukwirisa zvakanyanya. Asi pane zvinopesana, pane kuderedzwa uye kudzorwa zvine chekuita nezve nguva dzekusingaperi.
Iyi yekuchengetedza modhi ndiyo yakajairika pane ese uye inoiswa panguva chaiyo chaiyo. Kune rimwe divi, ivo havazivikanwe nevashambadzi vadiki nepakati. Kusvika pakuti ndeimwe yemari isingazivikanwe nevashandisi. Iko iko ichokwadi chaizvo kuti kupihwa nemaneja kwakanyanya kuwanda, zvese muhuwandu hwavo uye mune zvirevo zvakagadzirwa. Mupfungwa iyi, zvakafanira kuti iwe uzive kuumbwa kwayo kuti udzivise anopfuura mamwe mamiriro asingafadzi pane zvaunofarira.
Deredza kurasikirwa kunogona kuitika
Sezvaungave iwe wakamboona, iwe une inopfuura pfungwa imwe yekuve neyakaenzana mari yekudyara mari. Kubva munzira dzakasiyana zvachose uye kuti ivo vanovavarira kumarudzi ese evashambadzi vadiki nepakati. Iko kwaunongova nesarudzo yekupedzisira iwe pachako uye zvaunoda muhukama hwako nenyika inogara yakaoma yemari. Zvisinei nezvose, imwe yekiyi yekuzadzisa zvinangwa zvako ichagara mune kusiyanisa kwakasiyana kwekuchengetedza.
Uye sechirevo chekupedzisira, panogara paine zviwanikwa izvo zvigadzirwa izvi zvaunogona sangana nemhando dzemabhengi echinyakare. Semuenzaniso, ine maakaundi ane mari yepamusoro kana nguva yekuisa mari. Kubva pane zvinzvimbo zvinounza yakatarwa uye yakavimbiswa kudzoka gore rega. Kunyangwe izvi zviri zvishoma uye zviine miganho yekurebesa. Asi kuti iwe unozokwanisa kuripa pamwe nekukanganisa kurasikirwa kwaungawana mune yakachena uye yakapusa investa. Saka kuti nenzira iyi, kurasikirwa kwemari hakuna kuwanda sezvawaifunga pakutanga.
Nekuti iyo poindi ndeyekuti yako mari haina akakosha kuderera. Kunyanya panguva dzakaomesesa kumisika yemari. Nguva dzaunofunga nezvedanho rezvekudyara kwako uye zvinodikanwa kuti uite kuchinjisa kusinganzwisisike pakati pemari yakasarudzwa yemari Chero zvayakaita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Nzira yekugadzira yakaringana mari yekudyara mari?
Chii chinonzi IBI?